Android မွာ Camera Shutter Sound ကို ဘယ္လို ပိတ္မလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
Ko Thuya Jul 03, 2018
Samsung Devices မ်ားမွာ Camera App ရဲ႕ Settings ထဲသြားပါ။ Shutter Sound ကို Off လုပ္ေပးပါ။ စြမ္းရည္ျမင့္ ဖုန္း မ်ားမွာ Master Volume Settings ထဲမွ မီဒီယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသံကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ Shutter Sound ကို ပိတ္ႏိုင္ပါတယ္။ Volume Button ကို နွိပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ Phone Settings> Sound ထဲသြားျခင္းျဖင့္ Master Volume Settings ကုို သတ္မွတ္ပါ။
Huawei Device အခ်ိဳ႕မွာ Camera App > Menu > Settings ထဲသြားၿပီး Mute Option မွာ Enable လုပ္ေပးပါ။ ဒါဆိုရင္ Shutter Sound ကို ပိတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Honor စီးရီးမ်ားမွာလည္း ဒီနည္း အတိုင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
Android မှာ Camera Shutter Sound ကို ဘယ်လို ပိတ်မလဲ ?
စမတ်ဖုန်းများမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့ အခါမှာ Camera Shutter Sound ထွက်လာအောင် ဖန်တီးထားကြပါတယ်။ အဲဒီ အသံဟာ သင့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် ပိတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ ရှိပါတယ်။ ပိတ်နည်းများဟာ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး မတူညီကြပါဘူး။ သင့် ဖုန်းမှာ အဲဒီလို ပိတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် မပါရင် Silent Camera Pro လို App များကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
Samsung Devices များမှာ Camera App ရဲ့ Settings ထဲသွားပါ။ Shutter Sound ကို Off လုပ်ပေးပါ။ စွမ်းရည်မြင့် ဖုန်း များမှာ Master Volume Settings ထဲမှ မီဒီယာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသံကို ပိတ်ခြင်းဖြင့် Shutter Sound ကို ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ Volume Button ကို နှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် Phone Settings> Sound ထဲသွားခြင်းဖြင့် Master Volume Settings ကို သတ်မှတ်ပါ။
Stock Android မှာလိုပဲ LG ရဲ့ Camera App မှာ Shutter Sound ကို ပိတ်ဖို့ နည်းလမ်း မပါပါဘူး။ Master Volume Settings ထဲမှ မီဒီယာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသံကို ပိတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Do not disturb or Vibrate ကို သုံးရင်လည်း Shutter Sound ကို ကြားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
HTC Devices များမှာတော့ Camera App ရဲ့ Settings ထဲသွားပါ။ General Settings> Camera shutter sound ရဲ့ Check Box မှာ အမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်ပေးပါ။ HTC 10 မှာတော့ ပြုလုပ်နည်းက Stock Android Devices များနဲ့ တူညီပါတယ်။ Master Volume Settings ထဲမှာပဲ အသံကို ပိတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Motorola Phone အချို့ရဲ့ ကင်မရာ စကရင်မှာ Loudspeaker Icon လေးပါရှိပါတယ်။ အိုင်ကွန်ကို နှိပ်၍ Shutter Sound ကို Enable or Disable လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Moto G4 လို အခြား Motorola Phone များမှာ Shutter Sound ကို ပိတ်ဖို့ Master Volume Settings ကိုသာ သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
OnePlus Devices များမှာ Camera App ရဲ့ Settings ထဲသွားပါ။ Shutter Sound Option မှာ Off လုပ်ပေးပါ။
Huawei Device အချို့မှာ Camera App > Menu > Settings ထဲသွားပြီး Mute Option မှာ Enable လုပ်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် Shutter Sound ကို ပိတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Honor စီးရီးများမှာလည်း ဒီနည်း အတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Sony Xperia Devices အဟောင်းများမှာ Camera App > Menu > Settings ထဲသွားပြီး Sound Slider ကို Off လုပ်ပေးပါ။ အချို့ Sony Devices များမှာတော့ Master Volume Settings ကို အသုံးပြု၍ Shutter Sound ကို ပိတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။